Golaha Shacabka oo mar labaad ka dooday dib-u-eegida miisaaniyadda dowladda – Kalfadhi
Kulanka Golaha Shacabka ee maanta waxaa markale, markii labaad, ay Xildhibaanadu dib u eegayaan Miisaaniyaddii 2018-ka, taas oo 12-kii bishan markii la horkeenay Golaha uu dib ugu celiyey Wasiirka Maaliyadda, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle.
Beyle ayaa markaas yiri “dib ugu noqosho weyn ma jirto”, waxaana uu ula jeeday inuu Golaha ka doonayey inuu u ansixiyo Wasaaradda kaliya miisaaniyad uu sheegay iney soo korortay, hase ahaatee waa lagu diiday, oo waxa uu Guddoomiye Kuxigeenka Labaad ee Golaha, Mahad Cabdalla Cawad, ku yiri “inagu waxaan ansixinaa Xeer ay Guddiyadeenu ka soo shaqeeyeen”.
Isla miisaaniyaddii ayaa la filaayaa inuu Goluhu markale ka yeelanayo dood adag. ”
Ajendaha kulanka ayaa ah u codeynta ku noqoshada Miisaaniyadda 2018″ ayaa lagu yiri war lagu soo baabacay bogga Feysbuugga ee Golaha Shacabka.
Ajandaha kale ee maanta horyaala Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa ah “Aqrinta Saddexaad ee Hindise Sharciyeedka Golaha Mihnadlayaasha Caafimaadka” sida uu Goluhu ugu diray fariin Xildhibaanada. Laba jeer oo hore ayey arrintaas Goluhu si fiican uga doodeen, waxaana uu maanta marayaa aqrintii ugu dambeysay.